भुवनलाई फेरी आयो अर्को आरोप ! स्वेताले पनि ‘स्कृन सट’ सार्वजनिक गर्दै खोलिन् पोल ! (भिडियो हेर्नुस्) – Massive Khabar
Homeमनोरञ्जनभुवनलाई फेरी आयो अर्को आरोप ! स्वेताले पनि ‘स्कृन सट’ सार्वजनिक गर्दै खोलिन् पोल ! (भिडियो हेर्नुस्)
भुवनलाई फेरी आयो अर्को आरोप ! स्वेताले पनि ‘स्कृन सट’ सार्वजनिक गर्दै खोलिन् पोल ! (भिडियो हेर्नुस्)
(श्रोत : ई ताजा खबर)
‘फुलन्देको आमा’को नयाँ म्युजिक भिडियो !
सनिसलाई पहिलो गीतको अफर नै बहुप्रतिक्षित चलचित्रबाट आयो, भन्छन् – ‘पहिलो गीत गाउन पाउँदा आकाशमा उडेजस्तो महसुस गरें’ !
बले ले प्रेमिका संग पहिलोपटक तीज गीतमा खेले ,अनिता चलाउनेको सुमधुर आवाज ! (भिडियो)